शिक्षण अस्पताल निर्देशक नियुक्ति – Health Post Nepal
सात महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको निर्देशक पदका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ । सर्च कमिटीले आइतबार नियमानुसार तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सिफारिस हुनेमा डा. प्रेम खड्का, डा. वाइपी सिंह र डा. सुशील शील्पकार छन् ।
निर्देशक सिफारिसका लागि पहिलोपटक गठित समितिमा एकमत हुन नसकेपछि नाम सिफारिस नगरीकनै समिति विघटन भएको थियो । तत्पश्चात् त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ८ कात्तिकमा पछिल्लो सर्च कमिटी बनाएको थियो । त्रिवि नियमअनुसार आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. प्रदीप ज्ञवाली र डा. अभिमन्यु झा सदस्य थिए । अघिल्लोपटक विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्दा एक सदस्यले पार्टीनिकटका चिकित्सकलाई सिफारिस गर्न अडान राखेपछि विवाद भएको थियो । यसपटक भने पूर्ण रूपमा वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरिएको सर्च कमिटीमा एक सदस्यले बताए ।
वरिष्ठता हेर्दा प्राध्यापक भएको मितिलाई आधार मानिएको र एकैदिन प्राध्यापक भएको सन्दर्भमा भने सेवा प्रवेश मितिलाई थप आधार बनाइएको थियो । वरिष्ठता सूचीमा अगाडि रहेका केही प्राध्यापक निर्देशक बन्न अनिच्छुक देखिएकाले इच्छा राखेका र वरिष्ठतामा पनि अगाडि रहेकामध्ये तीनजना सिफारिसमा परेका हुन् । डा. गोविन्द केसीले वरिष्ठतासँगै पूरा चारवर्षे कार्यावधि बाँकी रहेकालाई मात्रै निर्देशक बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सिफारिसमा परेकामध्ये डा. खड्का १ वर्ष ७ महिनामा अवकाश पाउँदै छन् भने अन्य दुईको अवधि पूर्ण कार्यकालका लागि बाँकी छ ।
Posted in खबर, मुख्य खबरTagged त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शिक्षण अस्पताल निर्देशक नियुक्तिLeaveaComment on त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा सिफारिस, छनाेटकाे अाधार वरिष्ठता